Date My Pet » Inona no hatao amin'ny Voalohany A Date By Zodiaka Sign
Last nohavaozina: Jan. 15 2021 | 5 min namaky
Daty voalohany dia manahiran-tsaina anao foana ny antony isan-karazany. Faly ianao mba manana ny daty, sy ny mety hoe ahoana no tena ho avy, fa manahy momba ny fanaovana ny tsara fahatsapana. Part ny fanaovana fahatsapana tsara dia midika hoe mieritreritra ny daty fa ny olona hafa dia hankafy, Inona anefa no azonao atao fa rehefa tsy fantatrao ny momba azy ireo mbola? Raha fantatrao ny Zodiaka famantarana, manandrana mampiasa izany mba hanampy anao drafitra tonga lafatra daty. Vakio ao amin'ny:
Raha toa eo amin'ny daty miaraka amin'ny Aries, ho azo antoka fa ny mandeha ho action-pahamehana. An Aries tsy afaka mipetraka mbola ho ela, ary mila manao zavatra amin'ny fotoana rehetra. Ny fanaovana ny asa mafy any an-tokotany, toy ny Hiking na biking, Afaka niasa nandritra ny azy ireo. Raha te hijanona tao an-trano, miezaka vato anaty trano rehefa niakatra. Ataovy azo antoka ianao avy ny ampahany iray amin'ny daty haingana ny manaraka tsy mandany fotoana be loatra amin'ny fitaterana na eo amin'ny toerana misy azy ireo any ho very na liana mafy – talohan'ny daty dia na dia!
Raha toa eo amin'ny daty iray Taurus, fantatrareo fa ry zareo ny famantarana izay mitondra ny saina, ka manao na inona na inona izay manao ny saina miasa tsara indrindra. Handeha any amin'ny trano fisakafoanana mahafinaritra izay manana sakafo manan-karena, manatrika ny divay Tsiro, handany ny alina dihy, na handeha any amin'ny fampisehoana. Na aiza na aiza ianao, ho vonona ny mandany vola, satria tia rendrarendra Taurus. Ny hoe famantarana ny eto an-tany, tsy mampaninona manana mitsangantsangana tsara any an-tokotany raha mbola tsy dia maro ny Bibikely manodidina, ka raha handeha fa lalana, hitondra citronella labozia.
Raha toa eo amin'ny daty iray Gemini, hitondra azy ireo any ho any mangatsiaka, tsotsotra, izay misy betsaka ny olona manodidina azy ireo ara-tsaina mba Nandrisika, sy ny toerana ahafahanao manana resaka velona. Tandremo ny fahazavana sy ny horonan-taratasy foto-kevitra izany rehefa manova haingana lohahevitra. Tsy mampaninona na aiza na aiza izany na tena mitabataba be atao, toy ny fikambanana, ary marina toy izany. Mety hilaza zavatra tiany sahisahy, fa famantarana izany mihevitra fa ry zareo sahisahy kokoa noho izy ireo raha ny marina dia, ka tsy maka azy lavitra loatra ny fampiononana ivelan'ny faritra.
Raha toa ao amin'ny iray amin'ny daty Cancer, hitondra azy ireo any ho any izay mahazatra azy izy ireo, any ho any fantatrareo fa Betsaka ny eo anoloan'ny. Mila toerana nahazatra azy mba hahatonga azy ireo hahatsapa ho mahazo aina sy manaiky mbola holazainy aminao. Ny trano fisakafoanana mangina Azo inoana fa ny tsara indrindra dia Bet, indrindra fa raha manompo fampiononana ny sakafo sy ny manana farafara mafy fa tsy seza. Lazao ny mpandroso sakafo mba tsy hanelingelina ny roa aminareo be loatra ka halalaka ny fotoana mba ho aina aminao, ary ny roa afaka mifandray-pihetseham-po.
Raha toa ao amin'ny iray amin'ny Leo daty, izao no famantarana fa tia tantara an-tsehatra, ka miezaka mandeha mijery sinema, na ny teatra. Raha mankany amin'ny sarimihetsika, ho azo antoka fa ny farany indrindra amin'ny kintana flick, ary raha any amin'ny teatra, ho azo antoka fa fampisehoana ny mafana indrindra avy any amin'izao fotoana izao. Tiany hahatsapa amin'ny vahoaka ny amin'ny, ka na aiza na aiza alehanao, ataovy mahamay toerana. Raha ry zareo faran'izay flirty amin'ny tsy anao, fa ny olona rehetra izay tonga eo amin'ny fifandraisana amin'ny, misalasala maneho ny fahasaro-piaro kely. Raha ny marina izy ireo toy izay.
Raha toa eo amin'ny daty iray Virgo, aza manao na inona na inona loatra na sehatra, ary aza mandray azy ireo na aiza na aiza mitabataba na be atao. Ataovy toerana mangina izay afaka handre ny eritreriny. Tena azo ampiharina ry zareo, ka tsy mahazo izany raha manao zavatra flamboyant, na dia tantaram-pitiavana ny hevitrao no. Virgo no famantarana ny fahasalamana, ka miezaka manompo ny trano fisakafoanana izay sakafo ara-pahasalamana, na any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena miaraka aminy. Ho azo antoka ny tsy natoky tena ianao hampitony haingana, indrindra fa momba ny vatany, ka handoa azy ireo mafy compliments.
Raha toa eo amin'ny daty iray Libra, hitondra azy ireo any amin'ny tranom-bakoka-kanto, kanto Gallery, na ny zava-kanto fampirantiana. Izany no famantarana fa mankasitraka teny kanto indrindra. Afaka manao zavatra kanto aminy, ny mandeha any ny tanimanga fitaratra na amin'ny Studio glassblowing. Ho izy ireo mankafy ny asa famoronana zavatra miaraka aminao. Azonao atao koa ny miezaka ny fandehanana any amin'ny vaovao, trendiest toerana ao amin'ny tanàna, na ny trano fisakafoanana iray, Club, na valan-javaboary. Libras toy ny-on-iray ny saina, ka na dia ianao olona manodidina, foana ny nibanjina azy.
Raha toa eo amin'ny daty iray Scorpio, hikambana amin'ny toerana amin'ny maizina jiro. Ry zareo voasariky ny maizina, ka tsy misy andro daty. Mety ho alina koa vorondolo, ka misalasala manomboka ny daty tara. Tiany ny siansa, ka dia afaka manandrana ny siansa tranom-bakoka, indray mandeha indrindra ny ankamaroan'ny olona no lasa ary afaka ho irery tanteraka aminao. Ihany koa izy ireo tahaka ny lafiny maizina ny fiainana sy ny lohahevitra fady, ka raha afaka hitondra azy ireo any ho any mifandray amin'ny firaisana ara-nofo, fahafatesana, na ny ra sy ny tsinay, dry zareo amin'ny mety squeal glee.
Raha toa eo amin'ny daty iray Sagittarius, hisokatra ho traikefa nahafinaritra. Izany famantarana tia manao zavatra amin'ny whim, ka na inona na inona dia tsy manomana mety hitranga raha ny marina. Ianao manomboka avy eny ary, fa avy eo Veer any an-kafa, ka mihodina izany. Sagittarius tia kolontsaina sy ny firenena hafa, ka hitondra azy ireo any amin'ny toeram-pisakafoanana izay manompo hafakely nahandro, ary raha azonao atao dia lavitra, izany. Na izany teo akaiky teo, ary ianareo mijanona ora vitsy, na ianao mitsambikina amin'ny fiaramanidina, ary hiampita ny ranomasina, ry zareo ho an'ny mitaingina. Zavatra tafahoatra koa afaka miasa, toy ny skydiving.
Raha toa eo amin'ny daty iray Capricorn, ataovy araka ny nentin-drazana araka izay azo atao. Sakafo hariva sy ny sarimihetsika no a-ekena amin'ny famantarana ity. Tsy te ho natosiky ny fampiononana ivelan'ny faritra, ary te hanao zavatra efa fantany tsara. Hikambana amin'ny inona no ara-dalàna ho azy ireo, ary tsy ho any amin'ny adala. Raha afaka hitondra azy ireo any amin'ny sakafo hariva izay antoko maro mahomby, ny olona manan-danja ho, Ho anao izay baolina lehibe sasany hevitra. Izy tia ny hobnob amin'ny olona ny tohatra ara-tsosialy.
Raha toa eo amin'ny daty miaraka amin'ny Aquarius, ataovy toy ny unconventional araka izay azo atao. Izany famantarana tia zavatra tsy mahazatra sy ny samy hafa izy ireo na inona na inona tokony hanao azafady, ka hanosika hatrany ivelan'ny izay hainao araka izay azonao atao. Mahazo aina ihany koa ry zareo ao amin'ny vondrona daty, ny ankamaroany satria te ho voalohany aminareo namana ka miezaka izy ireo ny hitandrina izany tsotsotra. Mandehana any amin'ny toerana izay Eco-namana, lehibe amin'ny fanodinana, na ny toerana ahafahanao manao asa maha-olona sasany miara-, toy ny mitsimpona fako, an-tsitrapo tao amin'ny lakozia lasopy, na eny amin'ny fiantrana sakafo hariva.
Raha toa eo amin'ny daty iray Pisces, fantatro fa famantarana dia faran'izay tantaram-pitiavana, angamba mihoatra noho ny hafa, Ho faly izy ireo ka misy sappy fihetsehana. Ny tantaram-pitiavana izay sakafo hariva ianao, ary ny tady serenaded quartet miaraka anao an-tongotra teo amoron-dranomasina izy ireo no zavatra tiako tia. Pisces no tia ny rano, mba hahafahanao handeha hisakafo any amin'ny hotely ianao izay manana fomba fijery rano. Izy ireo ihany koa tia mozika, ka hiezaka ny fampisehoana, ny Symphony, na mivoaka dihy. Tena te ho akaiky anao. Oddball safidy? The Zoo. Tiany biby.